Kolontsaina faran’ny herinandro | NewsMada
Kolontsaina faran’ny herinandro
Par Taratra sur 25/07/2016
coliseum Antsonjombe : Nafana ny « Revinay taloha
Nanjakan’ny tanora ny fampisehoana ! Krutambull, Tempo Gaigy, Tif à Tif, Suspens, Nabaoh, 3%, Spesialista, tarika samy manana ny mpankafy azy. Na izany aza, niraisana kosa ny hatanorana nananan’ny mpijery. Tranga niteraka hafanana na teny an-tsehatra na tany amin’ny mpijery nandritra ilay seho goavana « Revinay taloha ».
Na nangatsiaka aza ny andro, nafana avy hatrany raha vao niakatra ny sehatra ry Sasha Krutam, Big Jim, Rad’z ary Mavaring ao amin’ny tarika Krutambull. Ho an’ity tarika manana ny maha izy azy ity, karazana seho santatra amin’ny fiverenany an-tsehatra ny teny amin’ny Coliseum, omaly.
« Hiragasy makotrokotroka » : Tsy nifampitsitsy ny roa tonta
Andro faharoa, omaly, ho an’ny adin-kiragasy “Hiragasy makotrokotroka”,
Tsy nifampitsitsy ry Rakotomandimby Pierre avy any Morarano Gara sy Ramilison Besigara Zokiny, avy eny Fenoarivo. Samy namoaka ny fahaizany mifehy ny kabary, feo, filalaovana zavamaneno, fanehoana tantara tao anaty reninkira, sns.
Tsikaritra ihany koa fa tian’ny Malagasy ny hiragasy, fa ilay tsy fahitana azy ity loatra eto an-dRenivohitra no miteraka tsy fahalalana izany ho an’ny tanora sy ny ankizy aty aoriana.
Nanatontosa: HaRy sy Fano ary Mamiherison.